MW Farmaajo & RW Kheyre oo isku qabtay arrinta Jubbaland | SMC
Home WARARKA MAANTA MW Farmaajo & RW Kheyre oo isku qabtay arrinta Jubbaland
MW Farmaajo & RW Kheyre oo isku qabtay arrinta Jubbaland
Sida ilo xog ogaal ah ay u sheegeen SMC waxaa MW Farmaajo iyo RW Kheyre ay isku qabteen lacago loogu talo galay dowlad goboleedyada oo ay bixisay ururka Midowga Yurub taasoo uu diiday MW Farmaajo in la siiyo dhiggii ay ku lahaayeen Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Lacagta oo dhan $1.8 milyan oo doollar aya waxaa MW Farmaajo uu ku amray RW Kheyre in aan la siin maamulka Axmed Madoobe.
Sida ay ilo wareedyada sheegeen, RW Kheyre oo markii hore ogolaaday in laga reebo Jubbaland aya waxaa la soo xiriiray Ururka Midowga Yurub, kuwaaso wargeliyay in dowlad Goboleedyada si siman loo wado siiyo lacagaha kabka miisaaniyadda maamulada ka tirsan Dowladda Federaalka ah, RW Kheyre aya ku wargeliyay ururka Midowga Yurub in MW Farmaajo uu ka biyo diiday in la siiyo Jubbaland, uuna ogolaaday la siiyo kuwa kale.
Ururka Midowga Yurub oo xiriir la sameeyay Villa Somalia aya waxaa arrintan aad uga carooday MW Farmaajo kaddib markii loo sheegay in RW Kheyre ku wargeliyay in loo diido lacagta maamulka Jubbaland.
Labada masuul aya waxaa dhex maray muran iyo dagaal ba’an, waxaana lagu kala tagay hanjabaad iyo ay dhammaatay wada shaqeynta labada masuul.
MW Farmaajo oo lagu waday in uu maanta dalka ka dhoofo aya dib u dhac ku yimid safarkiisa isagoo ku wajahan shirka golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ka furmaya magaalada New York toddobaadka soo socda.
Madaxweynaha aya lagu wada in uu maalinta berrito ah uu dalka ka dhoofo si uu uga qeyb galo shirka Qaramada Midoobay ee ku furmaya magaalada New York maalinta Isniinta ah.
Previous articleluul isaaq oo xoriyadeeda dib u heshay kadib mudo 14 maalmood Ah,
Next articleDF Somalia oo war culus ka soo saartay kacdoonka ka billowday gobolka Bakool